के कालो पृष्ठभूमि Android मा ब्याट्री जीवन बचत गर्न उपयोगी छ? | Androidsis
के कालो पृष्ठभूमिले एन्ड्रोइडमा ब्याट्रीको जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ?
ईडर फेरेनो | | ब्याट्री, एन्ड्रोइड धोखा दिन्छ
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको ब्याट्रीको साथ ठूलो व्याकुलता छ। त्यसकारण, नियमित आधारमा खोजी वा प्रयोग गर्नुहोस् युक्तिहरू जुनसँग ब्याट्री बचत गर्नुहोस् फोनमा, सबै प्रकारको मा बिभिन्न परिस्थितिहरु। हामीलाई थाहा छ, स्क्रिन एलिमेन्ट हो जसले स्मार्टफोनको प्राय: सबै भन्दा धेरै ब्याट्री खान्छ। यति धेरै चालहरू पर्दामा केन्द्रित हुन्छन् र स्क्रिनको उर्जा खपत कम गर्ने तरिकाहरू।
उहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ जब यो छ कालो वालपेपरको उपयोग गर्न सल्लाह। केही विज्ञहरूले यसलाई सिफारिस गर्छन् किनकि उनीहरू भन्छन् कि यो एन्ड्रोइडमा ब्याट्रीको जीवन बचाउने एउटा तरिका हो। के यो सल्लाहले कुनै अर्थ राख्छ? हामी तपाईंलाई तल यस बहसको बारेमा बढि बताउनेछौं।
ब्याट्री सकियो भन्ने डरले हामीलाई सँधै Android मा सबै प्रकारको ट्रिकहरू गर्न कोशिस गर्दछ। यद्यपि यस अवस्थामा, धेरैले कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछन् तपाईको फोनमा कालो वालपेपरको प्रयोग गर्नुहोस्, स्क्रिन खपत कम गर्ने एक तरिकाको रूपमा। जे होस्, यो त्यस्तो चीज हो जुन सत्य हुन सक्छ, यसले सबै केसहरूमा काम गर्दैन।
यस सम्बन्धमा साँचो तपाईंको फोनमा भएको स्क्रिनको प्रकार हो। सायद तपाई मध्ये धेरैजसोले पहिले यी विषयहरुका बारे सुनेका छौ। तर, प्यानलमा प्रयोग गरिएको टेक्नोलोजीको पावर खपतमा ठूलो प्रभाव छ। त्यसकारण, त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जससँग स्क्रिन छ जसको उपभोग कम भयो। त्यसो भए, कालो वालपेपर मद्दतको हुन सक्छ जब यो एन्ड्रोइडमा ब्याट्री बचत गर्न आउँछ।
कालो वालपेपर: ब्याट्री बचत गर्न?
यस अवस्थामा, यो यस्तो चीज हो जुन AMOLED स्क्रीनहरूमा सम्भव हुन्छ। हाल, धेरै स्मार्टफोनको यस प्रकारको स्क्रिन हुन्छ, विशेष गरी उच्च-एन्ड्रोइड भित्र हामी मोडेलहरू देख्छौं जुन तिनीहरूमा यस प्रविधि प्रयोग गर्दछन्। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ जान्नुहोस् कि उनीहरू कसरी स्क्रीनको अन्य प्रकारहरू भन्दा फरक छन्, स्मार्टफोन खरीद गर्दा।
AMOLED डिस्प्ले धेरै अधिक ऊर्जा कुशल छन् एक IPS LCD स्क्रीन भन्दा। यसको स्पष्टीकरण छ, जुन वास्तवमै सरल छ। AMOLED स्क्रीन को लागी कुनै प्रतिक्रिया छैन। यसको मतलब यो पिक्सेल भनेको एक हो जसले आफ्नै प्रकाश खडा गर्छ। त्यसोभए जब एन्ड्रोइड फोन स्क्रीन कालो छ, प्रश्न मा पिक्सेल बन्द छ, यो काम गरिरहेको छैन। जसको मतलब हो कि कुनै पनि समयमा ऊर्जा खपत भइरहेको छैन।
तसर्थ, यस विशेष अवस्थामा, जब तपाइँसँग एमोलेड प्यानलको साथ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छ, हो यो ब्याट्री बचत गर्न को लागी संभव छ। यति धेरै प्रयोगकर्ताहरू कालो, अँध्यारो वालपेपरको प्रयोग, ताकि खपत कम हुनेछ। त्यहाँ छन् धेरै वालपेपर उपलब्ध छन् विशेष गरी प्रयोगकर्ताहरूको लागि जोसँग यस प्रकारको स्क्रीनको साथ स्मार्टफोन छ। यहाँ पनि उनीहरूका लागि बढी रकम छन्.
तर यसको मतलब यो हो कि कालो वालपेपर प्रयोग गर्दा अर्थ लाग्दैन यदि तपाईंसँग आईपीएस एलसीडी स्क्रिनको साथ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छ भने। यस अवस्थामा देखि, स्क्रिनसँग प्रतिक्रिया छ जुन हामीले उल्लेख गरेका छौं। तसर्थ, यदि स्क्रिन कालो छ भने पनि कि त फोन निष्क्रिय छ वा किनभने तपाईंसँग पूर्ण कालो वालपेपर छ, यो त्यस्तो चीज होइन जुन तपाईंलाई ऊर्जा बचत गर्न मद्दत गर्दछ। तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ फोनमा कोष को सबै प्रकार को उपयोगर colors्गहरूले भरिएको।
यदि तपाईंसँग आईपीएस एलसीडी स्क्रिनको साथ एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छ भने, यसको पावर खपत कम गर्ने तरिका हो यसको चमक समायोजन गर्दै. यो वर्तमानमा मात्र एक मात्र प्रभावी तरीका हो स्क्रिनको खपत केही कम हुन गइरहेको छ कि प्राप्त गर्न। तसर्थ, यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले त्यस्ता अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने कम ब्याट्री उपभोग गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » ब्याट्री » के कालो पृष्ठभूमिले एन्ड्रोइडमा ब्याट्रीको जीवन बचाउन मद्दत गर्दछ?
Android ब्लुटुथ नाम कसरी परिवर्तन गर्ने
डोनाल्ड ट्रम्पले अपरेटर्सलाई चिनियाँ नेटवर्क उपकरण प्रयोग गर्नबाट रोक्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने छन्